उसले आफुसंग रहेको सांगीतिक सामग्रीलाई मोबाइल तथा डिजिटल प्ल्याटफर्महरुमा रिङ व्याक टोनको रुपमा उपलब्ध गराउनुकासाथै म्युजिक भिडिओ, टेलिभिजन श्रृंखला र चलचित्रहरु पनि निर्माण गरेको छ । म्युजिक नेपालले नेपाल सरकारको मान्यताप्राप्त एकमात्र सांगीतिक विद्यालय नेपाल संगीत केन्द्र पनि स्थापना गरेको छ । नेपाली संगीत तथा कलाको प्रबद्र्धनका लागि गर्दै आएका कामहरुको सम्मान स्वरुप म्युजिक नेपाललाई गोल्डस्टार इन्टरन्याशनल अवार्ड लगायत कैयौं राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय पुरस्कारहरु पनि प्राप्त गरेको छ ।
यो कम्पनीले पछिल्ला वर्षहरुमा ठुलो फड्को मार्ने प्रयासहरु गर्दै आइरहेको छ । अब भने म्युजिक नेपालले संसारभरिका प्रवासी नेपालीहरुलाई लक्षित गरी नेपालकै पहिलो भिडिओ स्ट्रिमिङ सेवा शुरु गर्न लागेको छ । युकेमा ‘नेपाल अन डिमाण्ड’ एप लन्च गर्ने तयारीलाई लिएर म्युजिक नेपालका सिइओ सन्तोष शर्मासँग नेपालीपत्रले गरेको कुराकानीः
‘नेपाल अन डिमाण्ड’ एप लन्च गर्ने तरखरमा हुनुहुन्छ ? यो कस्तो खाले एप हो ?
‘नेपाल अन डिमान्ड’ नामक मोबाइल एप मार्फत विश्वभर रहेका नेपालीहरुलाई मनोरञ्जन सेवा दिने तयारी थालेका हो । संसारभरी चलेको नयाँ ट्रेडलाई म्युजिक नेपालले क्याच गर्न कोसिस गरेको हो । विदेशमा रहेका नेपालीहरुले अब नेपाली मनोरञ्जनका सामाग्रहीहरु कहिले आउँला र हेरुला भन्न परेन । यो एपले त्यो बेग्रता मेटाउन काम गर्नेछ ।
विभिन्न गजेटका माध्यमबाट यस सेवाको लाभ लिन पाउनेछन् । यस एपबाट प्रत्यक्ष टेलिभिजन च्यानलहरु, दर्शकहरुले रुचाएका नेपाली चलचित्र हेर्न सक्नेछन् । स्रोताहरुको रुचीलाई ध्यानमा राखेर तयार गरिएका गीत, संगीतहरुको संग्रह लगायतका सामग्री एचडी फम्र्याटमा उपलब्ध गराउन लागेका हौ । हरेक हप्ता नयाँ चलचित्र तथा गीत संगीतहरु उपलब्ध गराउन म्युजिक नेपालले यो प्रयासको थालनी गरेको हो । विदेशमा रहेका नेपालीहरुले नेपाली मनोरञ्जनका सामाग्रीहरु अत्यन्त रचाउने गर्नुहुन्छ । उहाँहरुले नेपाली मनोरञ्जनका कन्टेटहरु खोज्ने गर्नुहुन्छ । यही मनोभावलाई नै बुझेर हामीले नेपाल अन डिमाण्ड एपलाई एउटा साकार रुप दिने प्रयास गरेका हौँ ।
उपभोक्ताले नेपाल अन डिमाण्ड एपबाट कसरी लाभ लिन सक्नेछन् ? यो एपलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिनेछ ?
यी सेवाहरु प्राप्त गर्न ग्राहकहरुले https://www.nepalondemand.com/ मा गएर निशुल्क परीक्षणको लागि रजिष्टर गरी आफ्नो एन्ड्रोइड वा आइओएस उपकरणमा एपहरु डाउनलोड गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि आफ्नो युजरनेम र पासवर्ड राखेर लग इन गरेपछि उच्च गुणस्तरको नेपाली टिभी तथा मनोरन्जन कार्यक्रमहरु हेर्न सकिनेछ।
प्रत्यक्ष भिडिओ स्ट्रिमिङ गरिने टेलिभिजन च्यानलहरुमा कान्तिपुर टिभी, इमेज च्यानल, एभेन्युज टिभी, हिमालय टिभी, एपिवान टिभी, न्युज २४ र बिटिभी बिजनेस छन् । कान्तिपुर र एपिवान एचडी फम्र्याटमा हेर्न सकिनेछ । त्यसैगरी कम्तीमा १२५ वटा नेपाली चलचित्रहरु कुनै पनि बेला हेर्न सकिनेछ । हरेक साता एउटा चलचित्र थप गर्दै लगिनेछ ।
यसबाहेक सबै च्यानलहरुमा छुटेका कार्यक्रम १२ घन्टासम्म हेर्न मिल्ने सुविधा, भिडिओ कन्ट्रोल, पहिले छाडेकै ठाउँबाट चलचित्र हेर्न मिल्ने त्यसैगरी क्रोमकास्ट र एपल एअरप्ले प्रयोग गरी आफ्नो टेलिभिजन सेटमा सबै च्यानल तथा अन्य सामग्रीहरु हेर्नसकिनेछ ।
त्यस्तै क्याचअप टिभी प्रयोगगरी ग्राहकहरुले गएको १२ घन्टामा छुटेको कुनैपनि कार्यक्रम हेर्न सक्नेछन् ।
युकेबाट नै ‘नेपाल अन डिमाण्ड’ एप लन्च गर्नुको विशेष कारण ?
हाम्रो टेक्नोलोजी पार्टनर युकेमा रहेको छ । अर्को विशेष कारण भनेको युकेमा नेपाली समुदायहरुको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ । सुरुमा हामीले सेटअपबक्सबाट यो सेवा दिने विचार गरेका थियौँ । युकेमा रहेको हाम्रो टेक्नोलोजी पार्टनरले यसबारे नयाँ कन्सेप्ट ल्याएपछि हामीले यसलाई नयाँ मोडालिटीमा जाने निर्णय गरेका थियौ । विश्वभरि नेपाली समुदायसम्म पुग्ने गरी नेपालको पहिलो टिभी तथा भिडिओ स्ट्रीमिङ सेवा शुरु गर्नु एउटा चुनौतीपुर्ण कार्य हो । यस एपको प्रचारको थालनी युकेबाट गर्ने हाम्रो विशेष योजना रहेको थियो । सो अनुरुप नै युकेबाट ‘नेपाल अन डिमाण्ड’ एपको लन्च हुन लागेको हो ।
बेलायतमा बसोबास गर्ने ग्राहकहरुले प्रति ग्राहक मासिक ७.९९ पाउण्ड तथा दुई जना ग्राहकले प्रति महिना ९.९९ पाउण्डमा यी सबै सेवाहरु प्राप्त गर्नसक्नेछन् । त्यस्तै सेवा शुल्क प्रति ग्राहक वार्षिक ७९.९९ र दुई जना ग्राहककालागि वार्षिक ९९.९९ तोकिएको छ ।
हामी बेलायतस्थित नेपालीहरुका व्यवसाय र कंपनीहरुको प्रगतिका भरपर्दो साझेदार बन्न चाहन्छौँ ।
युकेका नेपालीहरुप्रति नै लक्षित किन गर्नु भएको ?
युके र युकेमा रहेका नेपालीहरुसँग नेपालको पुरानो र प्रगाण सम्बन्ध रहेको छ । उहाँहरुले नेपाली मनोरञ्जन क्षेत्रमा ठुलो महत्वका साथ लिनुहुन्छ । हाम्रा विशेष कार्यक्रम युकेमात्र नभई अन्य देशहरुमा रहेका नेपालीहरु पनि हुन् । यसलाई बृहत रुपमा लैजाने योजना भएका कारण सुरुको प्राथमिकतामा युकेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरु पर्नु भएको हो ।
हेल्प नेपालसँग पनि सहकार्य गर्नु भएको छ ? यसबारे प्रष्ट पारिदिनुहोस् ?
व्यवसायिक रुपमा हामी अगाडि बढीरहँदा सामाजिक सेवालाई पनि हामीले उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेका छौ । एउटा गुडविलबाट नै विजनेश अगाडि बढ्ने हो । हेल्प नेपालले सामाजिक सेवामा उल्लेख्य कामहरु गर्दै आइरहेको छ । युकेमा पनि हेल्प नेपालको ठुलो प्रोजेक्टहरु रहेका छन् । त्यति ठुलो संस्थासँग सहकार्य गर्नु हाम्रो लागि पनि ठुलो प्लस पोइन्ट हो । कमर्सियल र सोसियल एप्रोचलाई हामीले सँगसँगै अगाडि लैजाने प्रयास गरेका हौँ ।
युके बाहेक अन्य देशमा पनि प्रचारको तयारी गर्नु भएको छ ?
विश्वभर रहेका नेपाली भाषीहरुका माझ नेपाल अन डिमाण्डको सुविधा दिने प्रयास हो । यसका लागि हामीले जनरल प्रचार प्रसार त गरकै छौ । अर्को भनेको विदेशमा रहेका नेपालीहरुमाझ पुग्नु हो । युकेमा प्रचार गरेपछि अन्य देशहरुमा पुग्ने पनि लक्ष्य राखेका छौ । यस एप प्रयोग गरेर विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेका नेपालीहरुले मनोरञ्जन लिन सकुन भन्ने हाम्रो उदेश्य हो ।
बागलुङ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग लागुपदार्थ सेवन (लापसे) जाँचको योजना छ तर, लापसे गरे÷नगरेको जाँच्न ‘टेस्ट किट’ भने छैन ।
चार्ल्टन समाजको समर कार्यक्रम आइतबार , कुलेन्द्र विक आउँदै
विगतका वर्षमा जस्तै मेरिडियन स्पोर्ट क्लबको खुला मैदानमा आयोजना हुने कार्यक्रममा चर्चित लोकदोहोरी गायक कुलेन्द्र विक मुख्य आकर्षण रहने भएका छन् ।
संगीतकार कालीप्रसाद बाँस्कोटाविरुद्ध संगीत चोरेको उजुरी
काठमाडौँ । गायक तथा संगीतकार कालीप्रसाद बाँस्कोटाविरुद्ध संगीत चोरीको उजुरी परेको छ । यसअघि पनि गीत चोरीको आरोप खेपेका बाँस्कोटाविरुद्ध बिक्की महतले महानगरीय प्रहरी परिसरमा उजुरी गरेका हुन् ।